Jodaisma - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fivavahana jiosy)
Ny jodaisma dia endriky ny fivavahan' ny Israelita na ny Jiosy (na Josy), indrindra taorian' ny faharavan' ny Tempolin' i Jerosalema (taona 587 tal. J.K.) sy taorian' ny fahababoan' ny Jiosy avy tany Babilôna (587 - 538 tal. J.K.). Ny jodaisma dia finoana an' Andriamanitra tokana atao hoe Iahveh. Jiosy no fiantsoana ny mpino ao amin' io fivavahana io. 15 000 000 no isan' ny Jiosy manerana izao tontolo izao ary ny 7 000 000 amin' ireo no mipetraka any Israely. Isan' ireo finoana nolovana tamin' i Abrahama izy ka atao hoe "finoana abrahamika" sahala amin' ny kristianisma sy ny finoana silamo.
Menorah (jiro fito rantsana) tao amin'ny Tempolin'i Jerosalema (famerenana ny endriny)
Milaza ny Jiosy fa ny fivavahany dia avy amin' i Abrahama (izay atao hoe rain' ny mino) sy amin' i Mosesy na Môizy (mpadahatra ny lalàn' i Israely). Ny Tanakh no Soratra Masin' ny jodaisma izay mirakitra ny Lalàna voasoratra (Torah) nambaran' Andriamanitra tamin' i Mosesy amin' ny ankamaroany teo amin' ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia). Misy koa ny Lalàna am-bava atao hoe Misnà izay manazava ny Lalàna voasoratra, izay voatahiry ao amin' ny Talmoda, asa soratra nataon' ny manampahaizana jiosy, ka ny fandraiketana an-tsoratra izany dia vita tamin' ny taonjato faha-6 taor. J.K.
Araka ny Baiboly dia i Abrahama razamben' ny Hebreo no rain' ny fivavahana jiosy. Nifindra fonenana tany Egipta ny Hebreo ka niharan' ny fanandevozana tao. Nampian' Andriamaitra i Mosesy hanafaka ny Israelita sy hitondra azy ireo mankany Kanaana. Rehefa tonga teo amin' ny tany Kanaana izy ireo dia niroborobo hatramin' izay ka hatramin' ny fandravan' ny Rômana azy ireo tamin' ny taona 70 taor. J.K. Ny fanompoam-pivavahana ao amin' ny Tempolin' i Jerosalema izay anatanterahana sorona dia nosoloana fanompoam-pivavahana ao amin' ny sinagôga izay trano fanaovana vavaka fa tsy fanaovana soro.
1 Tantaran' ny jodaisma
1.1 Ny fiavian' ny jodaisma
1.1.1 Fivavahan' i Abrahama, araka ny Baiboly
1.1.2 Ny iahvisma, araka ny fikarohana ara-tantara anketriny
1.2 Ny jodaisma tamin' ny Andro Taloha
1.2.1 Ny jodaisma nanomboka tamin' ny fahababoana
1.2.2 Ny jodaisma tamin' ny vanimpotoana rômana
1.2.3 Ny jodaisma rabinika, tsy misy Tempoly
1.3 Ny jodaisma tamin' ny Andro Antenatenany
1.3.1 Ny jodaisma niatrika ny filôzôfia grika
1.3.2 Ny Sefarada sy ny Askenazy
1.3.3 Ny kabala sy ny hasidisma
1.4 Ny jodaisma amin' ny Andro Vaovao
2 Ny Jiosy
3 Ny jodaisma sy ny fivavahana hafa
3.1 Ny jodaisma sy ny fivavahana hafa tamin' ny Andro Taloha
3.1.1 Ny jodaisma sy ny fivavahana tao Kanaana
3.1.2 Ny jodaisma sy ny zôrôastrisma
3.2 Ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny silamo
4 Finoana sy fitsipika ary fanompoam-pivavahana
4.1 Ny Lalàna
4.2 Ny finoana
5 Ny andro sy fety tokony tandremana
5.1 Ny Sabata
5.2 Ny andro fankalazana ara-pivavahana
5.2.1 Ny Pesakh
5.2.2 Ny Shavuot
5.2.3 Ny Sukkot
5.2.4 Ny Rosh ha-Shana
5.2.5 Ny Yom Kippur
5.2.6 Ny Shemini Atseret
5.2.7 Ny Simkhat Torah
5.2.8 Ny Khanukka
5.2.9 Ny Tu bi-Shevat
5.2.10 Ny Purim
6 Ny mpitondra fivavahana sy ny mpanazava ny Lalàna
6.1 Ny mpisorona sy ny levita hafa
6.2 Ny raby
6.3 Ny mpanoradalàna
7 Ny firehana sy sampan' ny jodaisma taloha
7.1 Ny tena fantatra
7.1.1 Ny Sadoseo
7.1.2 Ny Fariseo
7.1.3 Ny Eseniana
7.1.4 Ny Filôzôfia fahefatra
7.2 Ny firehana hafa
7.2.1 Ny Zelôta
7.2.2 Ny Ebiônita
7.2.3 Ny Nazôreana
7.2.4 Ny Elkasaita
7.2.5 Ny Hasideana
7.2.6 Ny Bôetôsiana
7.2.7 Ny Jiosin' i Elefantina
8 Ny sampan' ny jodaisma ankehitriny
8.1 Ny jodaisma rabinika
8.1.1 Ny jodaisma ôrtôdôksa
8.1.2 Ny jodaisma mpitahiry
8.1.3 Ny jodaisma nohavaozina
8.2 Sampana hafan' ny jodaisma
8.2.1 Ny jodaisma karaita
8.2.2 Ny jodaisma rekônstroksiônista
9 Ny literatioran' ny jodaisma
9.1 Ny Soratra Masin' ny jodaisma
9.1.1 Ny Lalàna na Torah
9.1.2 Ny Mpaminany na Nevi'im
9.1.3 Ny Soratra na Ketuvim
9.2 Ny soratra mivaofy ny Soratra Masina jiosy
9.2.1 Ny Talmoda
9.2.2 Ny Midrasa
9.3 Ny soratra ara-pivavahana tsy kanônika
9.3.1 Ny literatiora apôkaliptika
9.3.2 Ny literatioran' ny Lapa
9.4 Ny soratra mifandray amin' ny kolontsaina jiosy
9.4.1 Ny literatiora filôzôfika jiosy
9.4.2 Ny literatiora kabalistika
Tantaran' ny jodaismaHanova
Ny fiavian' ny jodaismaHanova
Fivavahan' i Abrahama, araka ny BaibolyHanova
Araka ny Baiboly dia i Abrahama razamben' ny Hebreo no rain' ny fivavahana jiosy. Notarihin' i Mosesy ny vahoaka hebreo ka niala avy tany Egipta izay nanandevozana azy ireo. Niforona avy amin' izany ny vahoakan' i Israely. Fotoana fohy taorian' ny fiaingany dia nanolotra lalàna i Mosesy, dia ny Didy Folo, izay azony tamin' Andriamanitra teo amin' ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia).
Ny iahvisma, araka ny fikarohana ara-tantara anketrinyHanova
Araka ny filazan' ny manampahaizana sasany dia tsy mônôteista tanteraka ny fivavahan' ny Hebreo tany amboalohany fa henôteista atao hoe iahvisma, izany hoe manompo andriamanitra iray izy ireo, dia i Iahveh izay antsoiny hoe Elohim koa matetika, nefa mino ny fisian' ny andriamanitra maro ivavahan' ny firenena hafa manodidina. I Iahveh dia tsy iza fa ny andriamanitry ny razany izay nanafaka azy ireo tamin' ny fahandevozana sy nitondra azy ireo tany amin' ny Tany nampanantenaina. Talohan' ny fahababoana tany Babilôna dia vondrom-poko nikambana ho fanjakana tokana i Israely. Ny fanafahana azy ireo avy amin' ny fanandevozana tany Egipta sy ny famaboany ny tany Kanaana no zava-nitranga nanorina ny tantaran' i Israely sy ny fivavahany. Ny fanompoam-pivavahana anaovana sorona dia notanterahina tao amin' ny fitoerana masina tao Jerosalema, nefa nisy fitoerana masina koa naorina tany Betela any amin' ny tanin' i Dana any avaratra izay nifaninana taminy. Rehefa nisaraka ny Fanjakan' i Jodà any atsimo sy ny Fanjakan' i Samaria any avaratra dia nipoitra ireo mpaminany hetsehin' ny fanahy izay nanameloka ny fivavahana mifangaroharo sy ny fiharatsian' ny fiarahamonina. Ho setrin' izany tsy fahatokian' ny vahoaka izany dia nobaboin' ny firenena hafa, dia ny Asiriana sy ny Babilôniana, ireo fanjakana roa ireo.
Ny jodaisma tamin' ny Andro TalohaHanova
Ny jodaisma nanomboka tamin' ny fahababoanaHanova
Fanaovan-tsesitany ny Jiosy tany Babilona
Ny fahababoana tany Babilôna izay nanomboka tamin' ny fandravana an' i Jerosalema sy ny Tempoly tamin' ny taona 586 tal. J.K. dia nitondra fiovana lehibe teo amin' ny fivavahan' ny jiosy. Tany Babilôna no namitana ny fanoratana ny ankamaroan' ny bokim-pivavanan' ny jiosy izay nanao fivoasana ny tantaran' ny Zanak' i Israely tamin' ny fampifandraisana izany amin' ny faharavan' i Jerosalema sy ny Tempoly. Andriamanitra dia ninoana fa naniraka an' i Babilôna hanafay an' i Israely nefa izy ihany koa no hanafaka azy amin' ny fahababoana raha mibebaka ny vahoakany. Tany Babilôna no tena niovan' ny fivavahan' ny Hebreo ho tena mônôteisma, ka i Iahveh dia tsy andriamanitry ny Jiosy irery fa Andriamanitry ny olona rehetra izay miasa ao amin' ny tantaran' ny zanak' olombelona sy ny firenena rehetra. Nitsiry koa ny fanantenana mpamonjy izay hanorina indray ny fanjakan' i Jodà hotapan' ny olom-boahosotr' Andriamanitra, atao hoe Mesia. Nihevitra ny Jiosy tamin' izany fotoana izany fa ny mpanjaka Kirosy Lehibe, izay nanome alalana ny vahoaka jiosy hody an-tanindrazana sy hanangana indray an' i Jerosalema sy ny Tempoly, io Mesia lazain' ny mpaminany io. Tsy tanteraka tao Jodà na Jodea amin' ny fomba feno anefa izany fanantenana izany satria tsy navelan' ny Persiana hitsangana ny fanjakan' i Jodà mahaleo tena fa fanjakana fehezim-bahiny nentin' ny mpisoronabe no nisy ka tsy nahafa-po ny Jiosy.
Ny jodaisma tamin' ny vanimpotoana rômanaHanova
Ny famaboan' i Aleksandra Lehibe ny Tany Atsinanana tamin' ny taona 331 tal. J.K. dia nampiditra ny kolontsaina grika izay tsy nankasitrahin' ny ankamaroan' ny vahoaka jiosy, na dia nisy ireo Jiosy helenista. Nipoaka noho izany ny fikomian' ny Makabeo teo anelanelan' ny taona 165 sy 142 tal. J.K. izay niseho tamin' ny endrika ady an-trano teo amin' ny Jiosy helenista sy ny Jiosy mandala ny fomban-drazana. Niova ho tolom-bahoaka izany ka azon' ny Jiosy ny fahaleovan-tena pôlitikan' i Jodea (na Jodia).
Nisy akony teo amin' ny fivoaran' ny jodaisma ireo ady ireo. Tamin' io vanimpotoana io no nipoiran' ny literatiora apôkaliptika izay maneho fa ny ady nifanaovan' ny Jiosy tamin' ny fanjakana hafa dia adin' ny Tsara sy ny Ratsy (jereo doalisma) izay tsy maintsy hiafara amin' ny fandresen' Andriamanitra. Nanomboka nampianarina sy nampanantenaina ny Jiosy fa ireo izay maty tamin' ny ady dia hitsangan-ko velona any am-parany, raha nampianarina fa ny tsy feteza-maty dia midika tsy fahataperan' ny fitohizan' ny taranaka fotsiny ihany fa tsy ny tsy fahafatesan' ny olona tsirairay, ary ny olona maty dia noheverina fa tsy hanam-pisiana ara-batana intsony fa ara-panahy ao amin' ny fiainan-tsi-hita atao hoe Sheola.
Nahaleo tena i Jodea nandritra ny 80 taona teo ho eo nefa fotoana nisian' ny korontana ara-pivavahana sy ny fizarazaràn' ny jodaisma koa izany. Nanorina ny fitondram-pianakaviana hasmôneana ny Makabeo. Tsy taranaky ny mpisorona levita izy ireo nefa nanendry ny tenany ho mpisoronabe nandova asam-pisoronana ka tsy nankasitrahin' ny Jiosy maro. Teraka noho izany sy noho ny fanarahany ny kolontsaina grika koa ny fanoheran' ny Jiosy azy ireo. Izany koa no nahatonga ny fiforonan' ny fikambanana tany Komrano nisaraka tamin' ny fivavahana tanterahina tao amin' ny Tempoly izay heveriny fa efa nolotoin' ny Hasmôneana ka nankanesan' izy ireo any an-tany efitra. Misy ny mpikaroka milaza fa ireo vahoaka nonina tany an' efitra ireo dia tsy iza fa ny Eseniana. Ny antoko matanjaka roa hafa, dia ny Sadoseo (na Sadoseanina) sy ny Fariseo (na Farizianina), ankoatry ny Eseniana, no nijanona nanao fanompoana miankina amin' ny Tempoly.
Tamin' ny fotoana nanaperan' ny tafika rômana ny fahaleovan-tena ara-pôlitikan' i Jodea tamin' ny taonjato voalohany tal. J.K. dia niroborobo ny mesianisma apôkaliptika ka isan' izany ny endriky ny fivavahana kristiana tany am-boalohany. Nitohy izany toe-javatra izany mandra-pahatongan' ny fikomian' ny Jiosy teo anelanelan' ny taona 66 sy 70 taor. J.K. izay niteraka ny fandravan' ny Rômana an' i Jerosalema sy ny Tempoly. Niseho indray ny fanoherana mitam-piadiana ny Rômana teo anelanelan' ny taona 132 sy 135 taor. J.K. izay notarihin' i Shimon Bar Kokhba.
Ny jodaisma rabinika, tsy misy TempolyHanova
Ny fanompoam-pivavahana ao amin' ny Tempolin' i Jerosalema izay anatanterahana sorona dia nosoloana fanompoam-pivavahana ao amin' ny sinagôga izay trano fanaovana vavaka fa tsy fanaovana sorona.
Ny fandravan' i Tito (emperona rômana) ny Tempoly Faharoa tamin' ny taona 70 sy ny faharesen' i Shimon Bar Kokhba tamin' ny taona 136 dia trangan-javatra nitovy lanja amin' ny fandravan' ny Babilôniana ny Tempoly Voalohany tamin' ny taona 586 tal. J.K. Very tanteraka ny fahaleovantenan' ny vahoaka jiosy ary tsy nisy intsony ny Tempoly hatao ivon' ny fivavahany. Nipoitra noho izany toe-javatra izany ny fihetsiketsehan' ny raby, dia ireo mpandimby ny Fariseo, izay nanizingizina ny tokony hisian' ny fivondronana sy ny fampiroboroboana ny fiainana ara-panahy. Raha mbola andrasana ny fanavotan' Andriamanitra an' i Israely amin' ny alalan' ny Mesia dia ny fandinihana sy ny fampianarana ary ny fitandremana ny Lalàna (na Torah) ao amin' ny sinagôga sy any an-tranon' ny raby aloha no asolo ny Tempoly. Nisy raby sasany nampianatra fa rehefa mitandrina ny Lalàna ny Jiosy rehetra dia tsy maintsy ho tonga ny Mesia.
Ny jodaisma tamin' ny Andro AntenatenanyHanova
Ny fahefan' ny raby teo amin' ny vahoaka jiosy manontolo dia nipetraka miandalana. Nisy ihany anefa ny fikambanana nanohitra izany toy ny Jiosy karaita. Tamin' ny taonjato faha-7 taor. J.K. no tafapetraka tanteraka ny jodaisma rabinika manerana ny ankamaroan' ny faritra nonenan' ny Jiosy. Niezaka nandrindra ny fanao ara-pivavanana sy ny fombam-pivavahana ireo lohan' ny sekoly rabinika any Babilôna tao Bagdada tamin' ny alalan' ny fanaparitahany ny heviny any amin' ny Jiosy am-pielezana. Tsy tao Palestina intsony izany ny ivon' ny fivavanana jiosy fa tany Babilôna, ary ny Talmodan' i Babilôna no lasa filamatra.
Ny jodaisma niatrika ny filôzôfia grikaHanova
Ny jodaisma rabinika dia nifanehatra tamin' ny filôzôfia grika ka lasa nisy ny Jiosy nanao filôzôfia. Nandalina izany filôzôfia izany ny raby mba hiatrehany ny fanoherana ny jodaisma nataon' ny Silamo sady hanehoana amin' ny Jiosy fa mifanaraka koa amin' ny lalàn' ny saina ny Lalàn' ny jodaisma sy ny finoany. Ny tena malaza amin' ireo filôzôfa jiosy ireo dia ny raby Saadia ben Joseph tamin' ny taonjato faha-9 sy i Judah haLevi ary i Moshe ben Maimon (atao hoe Maimônida) izay nanoratra ny fehezan-dalàna atao hoe Mishne Torah.
Ny Sefarada sy ny AskenazyHanova
Niteraka kolontsaina roa miavaka ny jodaisma tamin' ny Andro Antenatenany, dia ny Sefarada (tao Espaina) sy ny Askenazy (tao amin' ny tanin' ny Empira Masina Rômana Jermanika). Ny filôzôfia sy ny fanaovana ny Lalàna ho fehezan-dalàna voarindra dia nosahanin' ny Sefarada manokana, fa nifantoka tamin' ny fandalinana ny Talmoda ny Askenazy. Nanorina sekoly lehibe fandalinana ny Talmoda ny raby Shlomo ben Itzhak (atao hoe Rashi, fanafohezana ny hoe Rabbi Shlomo Itzhaki) tamin' ny taonjato faha-11. Nanohy ny asan' i Rashi ny mpianany sy ny zafikeliny, izay nanoratra ny literatiora Tosafot na Tosefot (hebreo: תוספות), izany hoe "tovana" amin' ny fivoasana nataon' i Rashi.
Ny kabala sy ny hasidismaHanova
Nandritra ny Andro Antenatenany dia nipoitra ny antoko mistika sy antokon' ny fitiavam-bavaka jiosy. Ny lehibe amin' ireo dia ny fihetsiketsehan' ny Hasidima (hebreo: Hasidim "tia vavaka") tao Alemaina tamin' ny taonjato faha-12 sy ny kabala tao Espaina tamin' ny taonjato faha-13.
Tamin' ny voalohany dia filôzôfia tsy natao ho an' ny daholobe na natao ho fantatry ny maro ny kabala fa miafina, izay ahitana fampianarana gnôstika sy neôplatonisiana. Ny asasoratra fototra ao amin' izany dia ny Sepher haZohar ("Bokin' ny famirapiratana") nosoratan' i Moshe ben Shem Tov. Tandindona sy famantarana ary sary an' ohatra momba ny Torah sy momba ireo didy maro no votoatiny. Nanjary firehana be mpanaraka izy taorian' ny fandroahan' ny Fiangonana katôlika ny Jiosy avy ao Espaina tamin' ny taona 1492. Izany fitomboan' ny isan' ny olona afaka manaraka ny kabala izany dia vokatry ny fivoasana manasongadina ny anjara toeran' ny Mesia nataon' i Yitzhak Ben Sh'lomo Luria. Ny kabalan' i Luria dia manome heviny ny fahoriana sy ny fijalian' ireo Jiosy nisesy tany ka nilaza fa misahana anjara asa iankinan-javatra betsaka ao amin' ny tantaran' ny fanavotana eto amin' izao tontolo izao izy ireo. Niteraka fihetsiketsehana mesianika lehibe izay nanova tanteraka ny fiainan' ny vahoaka jiosy tamin' ny taonjato faha-17 izany fiheveran' i Luria izany, ka i Sabbatai Zevi no nitarika izany.
Nisy akony tamin' ny firoborobon' ny hasidisma pôlôney koa izany fiheveran' i Luria izany nanomboka tamin' ny taonjato faha-18. Ny asa nataon' i Israel Baal Shem Tov no nampalaza izany hasidisma izany. Nambarany fa ny fanoloran-tena amim-pahazotoana sy ny hafanam-pon' ny Jiosy mahantra sady tsy mahay taratasy dia tsara lavitra hanompoana an' Andriamanitra noho ny fandalinana am-pahazarana fotsiny ny Talmoda. Nanohitra ny hasidisma ny antokon' ny raby nefa nihen-danja izany noho ny tahotr' ireo antoko roa mpifanohitra ireo ny fivoaran' ny filôzôfian' ny Fahazavana tao Eorôpa andrefana sy ny mety ho vokatr' io filôzôfia io teo amin' ny jodaisma.
Ny jodaisma amin' ny Andro VaovaoHanova
Nisy ny fankahalan' ny olona sasany ny Jiosy (antisemitisma) nefa nanomboka tamin' ny Revôlisiona frantsay dia nisy ny fahalalahana izay niteraka fiovana betsaka teo amin' ny fivavahan' ny Jiosy tao Eorôpa. Vokatr' izany dia teraka ny fanavaozam-pivavahana (jodaisma nohavaozina) izay niezaka ny hampirindra kokoa ny jodaisma ka isan' izany ny fanaovana amin’ ny fitenin' ny olona andavanandro ny toriteny (fa tsy amin' ny teny hebreo izay nihavitsy mpampiasa), ny fandaozana ny ankamaroan' ny fomba amam-panao jiosy noheverina fa antitra loatra, ny fanafohezana ny faharetan' ny fotoam-pivavahana. Naka tahaka ny fomban' ny mpitondra fivavahana kristiana ny raby mpankasitraka ny fanavaozana. Ny teôlôjianan' ny jodaisma mpanohana ny fanavaozam-pivavahana dia nanantitra ny momba ny fitondrantena sady natoky ny fivoaram-pandrosoan' ny zanak' olombelona. Na dia izany aza dia nisy ireo mpanavao fivavahana nandanjalanja ka nanohy ny fitorian-teny amin' ny teny hebreo sady nanaja ny fomba amam-panao nentin-drazana.
Ny jodaisma ôrtôdôksa nanohitra ny mpanavao fivavahana dia niezaka ny hampisy fifandanjana eo amin' ny fomba nolovaina tamin' ny razana sy ny fampianarana vaovao.
Ny Jiosy na Jody dia ireo Zanak' i Israely niaina taorian' ny fahababoana tany Babilôna, na ny olona manaraka ny fivavahana jodaisma. Israely no tany fiavian' ny Jiosy sy ny jodaisma. Araka ny Baiboly dia nomen' i Iahveh Andriamanitra azy ireo io tany io. Miisa any amin' ny 14 000 000 ny Jiosy amin' izao.
Ankehitriny na ny hoe Jiosy na Jody dia teny enti-manondro indrindra ireo mponina tao Jodea (na Jodia) tamin' ny andron' i Jesoa na ireo olona mpivavaka amin' ny jodaisma. Zavatra roa samy hafa ireo, nefa mifampiankina, satria misy ny Jiosy noho ny firenena niaviany, mety ho Kristiana na tsy mivavaka ireo; nefa misy koa ny Jiosy noho ny fivavahany. Ny dikany voalohany anefa no hita ao amin' ny Baiboly. Ny Lalàna israeliana ankehitriny dia mamaritra ny atao hoe Jiosy ho olona nateraka reny jiosy na olona niova finoana ho amin' ny jodaisma.
Ny jodaisma sy ny fivavahana hafaHanova
Ny jodaisma sy ny fivavahana hafa tamin' ny Andro TalohaHanova
Ny jodaisma sy ny fivavahana tao KanaanaHanova
Ny fivavahana kanaanita dia ireo fivavahana semitika taloha izay narahin' ireo Kanaanita niaina tao Kanaana tamin' ny fiandohan' ny Andron' ny Alimo ka hatramin' ny taonjato voalohany taor. J.K. Ny Kanaanita dia mivavaka amin' andriamanitra maro (pôliteisma), nefa indraindray koa amin' ny iray amin' ireo andriamanitra maro (mônôlatria). Isan' ny andriamanitry ny Kanaanita ireo andriamanitra mitondra ny anaran hoe Ahserah, El, Baal, Dagon ary Yahweh (lasa anaran' ny andriamanitry ny Israelita taty aoriana) izay resahina koa ao amin' ny Baiboly.
Ny jodaisma sy ny zôrôastrismaHanova
Maro ireo mpahay tantara mihevitra fa nisy akony lehibe teo amin' ny jodaisma ny zôrôastrisma (fivavahana mônôteista naorin' i Zaratostra avy amin' ny fivavahana pôliteista) tamin' ny taonjato faha-6 tal. J.K. rehefa nahazo an' i Babilôna izay nanaovana sesitany ny mponin' i Jodà ny Persiana. Nisy fiantraikany teo amin' ny foto-pampianaranan' ny fivavahana jiosy ny rafitra nisy ao aminy araka ny hita ao amin' ny Bokin' ny fitsipi-pifehezana hita tao amin' ireo soratanam-piraketan' ny Ranomasina Maty. Hita ao ireo lohahevitry ny zôrôastrisma izay mitovitovy amin' ny an' ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo.
Ny ankamaroan' ny lahatsoratry ny jodaisma - momba ny lohahevitra toy ny fiainana aorian' ny fahafatesana, ny fiandrasana mesia, ny fitsarana aorian' ny fahafatesana, ny lanitra sy ny helo, ny safidy malalaka ananan' ny olombelona - dia niseho tamin' ny vanimpotoana nanjakan' ny Persiana amin' i Jodea, ka azo eritreretina ny fisian' ny akon' ny zôrôastrisma amin' ny fivavahana jiosy, izany hoe lohahevitra momba ny eskatôlôjia. Isan' ny lohahevitra mety azon' ny jodaisma tamin' ny zôrôastrisma koa ny demônôlôjia. Izany dia tsy hita raha tsy ao amin' ny soratra jiosy taorian' ny fahababoana tany Babilôna (taona 597 - 538 tal. J.K.), izay nifampikasohan' ny manampahaizana jiosy tamin' ny Persia sy ny fivavahana iraniana sy korda.
Ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny silamoHanova
Ny jodaisma sy ny kristianisma
Ny jodaisma sy ny kristianisma dia fivavahana abrahamika samy miorina amin' ny Baiboly hebreo antsoin' ny Kristiana hoe Testamenta Taloha. Nipoitra avy tamin' ny andron' ny Tempoly Faharoa ny kristianisma nefa nisaraka ireo fivavahana roa ireo tamin' ny taonjato voalohany taor. J.K. Nihamafy miandalana izany fisarahana izany nanomboka tamin' ny taonjato faha-2 taor. J.K.
Nanamafy ny ataony hoe finoana marina (na ôrtôdôksia) ny kristianisma ka nifantoka amin' ny fanekem-pihavanana vaovao amin' ny alalan' i Jesoa Kristy, araka ny voasoratra ao amin' ny boky manokan' ny Kristiana, dia ny Testamenta Vaovao. Ny jodaisma kosa dia manamafy izay ataony hoe fitondrantena marina (na ôrtôpraksia) izay mifantoka amin' ny fanekem-pihavanan' i Mosesy (na Môizy) araka ny hita ao amin' ny Torah sy ny Talmoda.
Mino ny famonjena ny olona tsirairay ho afaka amin' ny fahotana amin' ny alalan' ny fandraisany an' i Jesoa ho Tompo sy mpamonjy ny Kristiana. Ny Jiosy kosa mino ny fandraisana anjaran' ny olona tsirairay sy miaraka ao amin' ny fifampiresahana mandrakizay amin' Andriamanitra amin' ny alalan' ny lovantsofina, ny fombafombam-pivavahana, ny vavaka ary ny fitondran-tena tsara. Mino Andriamanitra tokana misy persôna telo ny ankamaroan' ny Kristiana, ka ny iray amin' ireo persôna telo ireo dia inoany fa tonga olombelona ao amin' i Jesoa Kristy. Ny jodaisma kosa manamafy ny maha iray tsy mivaky an' Andriamanitra ka mitsipaka ny fiheverana kristiana ny amin' ny Andriamanitra tonga olombelona.
Ny jodaisma sy ny finoana silamo
Fivavahana abrahamika sahala amin' ny jodaisma sy ny kristianisma ny finoana silamo. Nanomboka tamin' ny taonjato faha-7 taor. J.K. tamin' ny nahaterahan' ny fivavahana silamo sy ny fielezany tao amin' ny Saikanosin' i Arabia. Samy mandala soatoavina sy hevitra fototra ary fitsipika mitovitovy ny jodaisma sy ny finoana silamo. Ataon' ny silamo ho ampahan-tantarany ny tantaran' ny jodaisma. Zava-dehibe amin' ny finoana silamo ilay fitenenana hoe "Zanak' i Israely". Amin' ny silamo dia mpaminany lehibe i Mosesy (arabo: موسى / Musa) sady heveriny fa mpaminanin' ny finoana silamo no irak' Andriamanitra. Resahina matetika kokoa noho ny hafa rehetra i Mosesy ao amin' ny Kor'any ary tantaraina bebe kokoa noho ny an' ny mpaminany hafa ny fiainany. Resahina in-43 ny Israelita ao amin' ny Kor'any, ary matetika ao amin' ny Hadita maro. Toy ny Kristiana sy ny Miozolmana koa dia ataon' ny fivavahana silamo hoe "Olon' ny Boky" (arabo: اهل الكتاب / ahl al-kitâb) ny Jiosy.
Maro ireo zavatra itovian' ny fivavahana roa noho ny maha samy fivavahana abrahamika azy ireo, sy ny akon' ny filôzôfia silamo amin' ny vahoaka jiosy any amin' ny tontolo miozolmana. Nifampikasoka sy nisy zavatra nifampizarana ireo fivavahana roa ireo nandritra ny 1 400 taona, na ara-pôlitika izany, na ara-teôlôjia. Tamin' ny fananganana ny Fanjakan' i Israely vaovao tamin' ny taona 1948 anefa dia niharatsy ny fifandraisana eo amin' ny Jiosy sy ny Miozolmana.
Finoana sy fitsipika ary fanompoam-pivavahanaHanova
Ny Lalàna voasoratra, ny Tanakh (Baiboly jiosy), no loharano fototry ny fivavahana jiosy. Ao no ahitana ny Torah. Ao no ahitana ireo fitsipiky ny fiainam-pivavahana teo amin' i Israely. Ao koa no misy ireo soratra momba ny fiavian' izao tontolo izao sy ny tantaran' i Israely ary ny fampianarana momba ny fitondran-tena tokony hananan' ny vahoaka jiosy. Misy koa ny Lalàna am-bava izay voarakitra an-tsoratra ao amin' ny Talmoda, izay manome ny fanazavana ilaina amin' ny fampiharana ny didin' ny Torah.
Ny tenim-pinoana lehibe ao amin' ny jodaisma dia ireto:
Tokana Andriamanitra sady izy no mpahary izao tontolo izao;
I Mosesy no lehibe indrindra amin' ny mpaminany rehetra, izay nandray avy amin' Andriamanitra ny Lalàna mifehy ny fiarahamonina sy ny fivavahana jiosy.
Handefa Mesia Andriamanitra, araka ny efa nambaran' Andriamanitra tamin' ny mpaminany mialoha, mba hamerina indray ny fanjakan' Andriamanitra.
Ny andro sy fety tokony tandremanaHanova
Ny Sabata, izay atao hoe שָׁבַת / Shabbat amin' ny teny hebreo, dia andro fitsaharana izay mifanandrify amin' ny andro fahafito amin' ny herinandro jiosy, izany hoe ny Asabotsy. Araka ny voalaza ao amin' ny Baiboly dia nasain' Andriamanitra notandreman' ny Zanak' i Israely ny andro Sabata. Zava-dehibe indrindra ao amin' ny jodaisma ny andro Sabata ka hajain' ny Jiosy fatratra. Ny olona tsirairay dia tokony hampitsahatra na hampihena araka izay azo atao ny asa rehetra amin' ny andro Sabata mba hifantohany amin' ny fianakaviany sy ny ankohonany. Andro tsy fiasana ara-panjakana ny andro Sabata ao amin' ny Fanjakan' i Israely ka mahazo ny trano fivarotana sy ny fitaterana izany.
Ny andro fankalazana ara-pivavahanaHanova
Fankalazana anaovana fivahiniana masina
Ny Pesakh (hebreo: פֶּסַח) io no Paska jiosy; ahatsiarovana ny nandalovan' ny fahafatesana eny ambonin' ny tranon' ireo Jiosy tany Ejipta ka tsy nahafaty ny voalohan-terany sady ahatsiarovana koa ny fivoahan' ny razany avy tamin' ny fanandevozana tany Ejipta; ankalazina manomboka amin' ny 15 hatramin' ny 22 Nisan.
Ny Shavuot (hebreo: שבועות "herinandro") na Pentekôsta ankalazana ny fijinjana ny varimbazaha sy ahatsiarovana ny nanomezan' Andriamanitra ny Torah tany an-tendrombohitra Sinay; ankalazaina amin' ny 6 Sivan.
Ny Sukkot (hebreo: חַג הַסֻּכּוֹת / Hag ha-Sukkot "fetin' ny trano lay" na "fetin' ny tabernakely"); ahatsiarovana an-kafaliana ny nanampian' Andriamanitra ny Zanak' i Isiraely tamin' ny nivoahany avy any Egipta, ahatsiarovana ny fivahiniana mandritra ny 40 taona tany an-tany efitra taorian' ny fivoahana avy tany Egipta, ary iravoravoana amin' ny fahataperan' ny tsingerin' ny fotoam-pambolena amin' ny taona; ankalazaina manomboka amin' ny 15 hatramin' ny 21 (na 22) Tishri.
Fankalazana tsy anaovana fivahiniana masina
Ny Rosh ha-Shana (hebreo: רֹאשׁ הַשָּׁנָה "fiantombohan' ny taona" na יוֹם תְּרוּעָה‬ /Yom Teruah "androm-piantsoana"); ankalazana ny taom-baovao ivelan' ny fivavahana; ankalazaina amin' ny 1 sy 2 Tishri (ny taom-baovaom-pivavahana dia ny 1 Nisan).
Ny Yom Kippur (hebreo: יוֹם כִּיפּוּר‬ na יום הכיפורים / Yom ha-Kippurim "andron' ny famelan-keloka" na "androm-panavotana") anaovana fifadian-kanina sy vavaka be; tanterahina amin' ny 10 Tishri.
Ny Shemini Atseret (hebreo:שְׁמִינִי עֲצֶרֶת‬ "valo andro fivoriana" na יּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת / Yom ha-Shemini Atseret "fetim-pamaranana amin' ny faha-valo andro"); anombohan' ny fotoana irotsahan' ny rononorana ao Israely; ankalazaina amin' ny 22 Tishri.
Ny Simkhat Torah (hebreo: שמחת תורה / "hafalian' ny Lalàna"); ankalazana ny Torah ("Lalàna") ka itondrana am-pilaharana ny horonam-boky mirakitra azy; tanterahina amin' ny 22 sy 23 Tishri.
Ny Khanukka (hebreo: חג החנוכה / Hag ha-Khanukka "fetin' ny fanorenana"); ahatsiarovana ny fitokanana indray ny alitara fanaovam-panatira ao amin' ny Tempoly Faharoa tao Jerosalema, tamin' ny fiverenana amin' ny fanompoam-pivavahana jiosy, telo taona taorian' ny nandraran' i Antiôkôsy IV (Seleokida) an' izany, manomboka amin' ny 25 Kislev hatramin' ny 2 Tevet.
Ny Tu bi-Shevat (hebreo: ט"ו בִּשְׁבָט na חֲמִשָּׁה עָשָׂר בִּשְׁבָט / "dimy ambin' ny folo andron' ny Shevat"); taom-baovaon' ny hazo; ankalazaina amin' ny 15 Shevat.
Ny Purim (hebreo: פּוּרִים / He-Purim); ahatsiarovana ny nanavotan' i Estera ny Jiosy tamin' ny fanenjehan' i Hamana; ankalazaina amin' ny 14 (sy 15) Adar.
Ny mpitondra fivavahana sy ny mpanazava ny LalànaHanova
Ny mpisorona sy ny levita hafaHanova
Ny mpisorona dia mpitondra fivavahana ao amin' ny fivavahan' ny Israelita fahiny sy ny Jiosy izay natokana hanatanteraka ny fanompoana ao amin' ny Tempoly ka olona nofidina avy amin' ny fokon' i Levy taranak' i Aarona izy ireo. Mizara roa ny mpisorona, dia ny mpisoronabe sy ny mpisorona tsotra. Lehilahy avy amin' ny fokon' i Levy tsy taranak' i Aarona kosa no azo atao mpisorona madinika, fa tsy maintsy taranak' i Aarona kosa ny mpisoronabe. Izy ireo no misahana ny fanaovana sorona, ny fampianarana ny Lalàn' i Mosesy amin' ny vahoaka, ny fandaminana ny fotoam-pivavanana ao amin' ny Tempolin' i Jerosalema ary ny fitsofan-drano ny vahoaka. Nandritra ny vanimpotoan' ny Tempoly Faharoa dia anjara asan' ny mpisoronabe ny fisahanana ny maha filohan' ny Sinedriona azy. Ny Levita tsy mpisorona dia afaka manampy ny mpisorona amin' ny fanaovana raharaha amin' ny toerana sasany ao an-tempoly.
Rehefa rava ny Tempoly Faharoa sy i Jerosalema tamin' ny taona 70 taor. J.K. dia nihavery lanja ny mpisorona ary tsy nisy intsony ny asam-pisoronana eo amin' ny fivavahana jiosy. Nanjavona niaraka tamin' ny faharavan' ny Tempoly ny mpisoronabe.
Ny raby dia Jiosy mpiandraikitra ny fanompoam-pivavahana sady filoha ara-panahy no mpitarika ara-pivavahana ao amin' ny vondron' olona jiosy iray, izay misahana koa ny fampianarana ny Lalàna. Ny raby dia sady mpandalina no mpanao fivoasana ny Torah. Araka ny fomba jiosy taloha dia ny lehilahy ihany no afaka misahana ny asan' ny raby nefa maro ireo seminera izay manosotra raby vehivavy ankehitriny.
Ny mpanoradalàna (hebreo: סופרים / soferim) dia olonkendry niasa nandritra ny vanimpotoan' ny Tempoly Faharoa. Ny vanimpotona niasany dia mety nandritra ny an' ny Fivoriam-be izay niantomboka tamin' ny andron' i Ezra na Esdrasa, izay sady lohan' ny Sôferima no filoha voalohan' ny Fivoriam-be, ka nifarana tamin' ny andron' i Simôna ilay Marina izany. Ny anjara asan' izy ireo dia ny mamaky eo anatrehan' ny vahoaka ny Tanakh sady manazava izany.
Ny firehana sy sampan' ny jodaisma talohaHanova
Ny tena fantatraHanova
Ny Sadoseo na Sadoseanina (hebreo: צְדוּקִים / Ṣĕdûqîm na Tsadukim) dia ireo mpikambana amin' ny antoko iray amin' ny efatra lehibe amin' ny firehan' ny fivavahana jiosy tamin' ny Andro Taloha tao Jodea tamin' ny taonjato faha-2 tal. J.K. sy taonjato voalohany taor. J.K. Nahitana ireo mpisorona amin' ny saranga ambony ny Sadoseo. Tsy inoany ny fitsanganan-ko velona. Tsy ekeny koa ny lovatsofin' ny Fariseo izay maneho fomba fijery ntaolo kokoa ny lalàna sy ny fivavahana.
Ny Fariseo na Farizianina (hebreo: פְּרוּשִׁים / pěrûšîm) dia ireo Jiosy amin' ny antoko iray tao Jodea nandritra ny vanimpotoan' ny Tempoly Faharoa, izany hoe tamin' ny taonjato faha-2 tal. J.K. sy ny taonjato voalohany taor. J.K. Atao hoe farisaisma na farizianisma ny firehan-kevitra ara-pivavahan' izy ireo. Ny Fariseo no mpialoha lalana mivantana ny fihetsiketsehan' ny Raby izay nipoitra taorian' ny taona 70 taor. J.K. Maro ny fampianaran' ny Fariseo izay tafakambana ao amin' ny lovatsofin' ny Raby. Miavaka ny fampianaran' ny Fariseo noho izy mifototra amin' ny Torah am-bava mba handraiketana ny lalàna jiosy. Ny tena loharano manoritsoritra ny amin' ny Fariseo dia ny boky nosoratan' i Flavio Josefa sy ny Testamenta Vaovao ary ny soratr' ireo Raby.
Ny Eseniana (grika: εσσήνοι / essēnoi; hebreo: אִסִּיִים, Isiyim) dia ireo olona tao amin' ny antoko mpanaraka ny jodaisma tamin' ny vanimpotoan' ny Tempoly Faharoa izay niroborobo nanomboka tamin' ny taonjato faha-2 tal. J.K. sady nanomboka fanta-pisiana tamin' ny taonjato voalohany tao Palestina. Fikambanan' olona miaina anaty fahantrana an-tsitrapo ny Eseniana sady manatanteraka filomana an-drano isan' andro (sahala amin' ny batisa) sady mifady ny fahafinaretana eto amin' izao tontolo izao.
Ny Filôzôfia fahefatraHanova
Ny Filôzôfia fahefatra na Sekta fahefatra na Fikambanan' i Jodasy Galileana dia anarana nomen' i Flavio Josefa ny fihetsiketsehana na fikambanana noforonin' i Jodasy Galileana (mpitarika ny Jiosy mpikomy tao Galilea sy tao Jodea tamin' ny nahalasa faritany rômana an' i Jodea) tamin' ny andron' ny fikomiana nataon' ny Jiosy (taona 66 taor. J.K.) hanoherana ny fanisam-bahoaka nampanaovin' i Kirinio tamin' ny taona 6 taor. J.K. raha lasa faritanin' i Jodea fehezin' ny Rômana mivantana ny faritra notapahin' i Herôda Arkelaôsy. Ity firehana ity dia manizingizina ny amin' ny atao hoe fahafahana sy ny atao hoe fanjakana tsy refesi-mandidin' ny Andriamanitr' i Israely ary manandratra avo ny fitiavan-tanindrazana sy ny fiandrasana ny fanafahana amin' ny andro farany hataon' Andriamanitra (fanafahana eskatôlôjika). Ny tapany farany tamin' ny fotoana nisehoan' ny fikomian' ny Jiosy dia ny fanoherana hiarovana ny toby famaharana Masada notarihin' i Eleazara zanak' i Jairo, izay zafikelin' i Jodasy Galileana (taona 74).
Ny firehana hafaHanova
Ny toeram-pamaharana Masada jerena avy atsinanana
Ny Zelôta (grika: ζηλωτής / zêlôtês; raha tokana, ζηλωταί / zêlôtai, raha maro), izay atao hoe קנאים / Qana'im amin' ny teny hebreo, dia fikambanana namporisika ny vahoaka jiosy tao amin' ny faritanin' i Jodea hikomy amin' ny Fanjakana rômana sady handroaka azy ity amin' ny alalan' ny fiadiana. Izy no lohany tamin' ny fandraisana anjara tamin' ny Fikomiana lehibe nataon' ny Jiosy tamin' ny taona 66 hatramin' ny taona 70 taor. J.K.
Ny Ebiônita (grika: Ἐβιωναῖοι / Ebiônaîoi, izay avy amin' ny teny hebreo hoe אביונים / ebyonim "mahantra, malahelo") dia ireo Kristiana jiosy tamin' ireo taonjato voalohandohany nisian' ny kristianisma. Amin' izy ireo dia i Jesoa no Mesia nefa lavin' izy ireo ny maha Andriamanitra azy sy ny fiteraham-birijiny azy sady manamafy izy ireo fa tokony hotandremana ny Lalàna sy ny fombam-pivavahana jiosy. Ny Evanjely hebreon' i Matio, manomboka amin' ny toko fahatelo, no ampiasainy. Hajainy i Jakoba rahalahin' i Jesoa (atao hoe Jakoba ilay Marina) nefa laviny i Paoly noho ity apôstôly ity mandà ny Lalàna jiosy. Midika fanoloran-tena ho amin' ny fiainana ao anaty fahantrana io anarana Ebiônita iantsoana azy ireo io. Ny teny hoe Ebionim dia nampiasain' ny sekta tao Komrano izay nisaraka tamin' ny fahasimban' ny fivavahana tao an-Tempoly.
Ny Nazôreana na Nazareana (grika: Ναζωραῖος / Nazôraios; hebreo: נוצרים / Notzrim) dia vondrona ara-pivavahana jiosy mesianika tsy dia fantatra loatra, izay fanta-pisiana tamin' ny taonjato voalohany. Ity vondrona ity dia manaiky an' i Jesoa ho Mesia nefa manaja ny lalàm-pivavahan' ny Jiosy. Tsy mino ny maha Andriamanitra an' i Jesoa anefa izy ireo.
Ny Elkasaita na Elkesaita na Helkasaita na Elkesaiana (avy amin' ny anaran' ilay olona heverina fa namorona azy, atao amin' ny teny grika hoe Ἠλχασαΐ / Elkhasai na Ἠλξαί / Elksai na Ελκεσαΐ / Elkesai) dia ireo tao amin' ny fikambanana ara-pivavahana jodeô-kristiana batista sinkretika manam-pirehana gnôstika izay sady isan' ny jodaisma ankapobeny amin' ny lafiny sasany, no isan' ny jodaisma nazôreana.
Ny Hasideana (hebreo: חסידים / Hassidim "tia vavajka") dia antoko jiosy tia vavaka izay nanomboka nandray anjara mavitrika teo amin' ny lafiny pôlitika nandritra ny fikomian' ny Makabeo, na dia efa nisy aza izany taloha. Ny Bokin' ny Makabeo dia miresaka azy ireo in-telo.
Ny Bôetôsiana (hebreo: בייתוסים / baitôsîm) dia ireo mpikambana ao amin' ny fikambanana jiosy tamin' ny faramparan' ny vanimpotoan' ny Tempoly Faharoa. Amin' ny lovantsofina rabinika dia manam-pifandraisana akaiky amin' ny Sadoseo na Sadoseanina ny Bôetôsiana na fivoaran' ny Sadoseo. Mety ho momba ny fianakaviana mpisoron' i Bôetôsy ny fikambanana bôetôsiana, nefa mbola tsy mifanaraka ny amin' izany ny mpikaroka.
Ny Jiosin' i ElefantinaHanova
Ny Jiosin' i Elefantina dia vahoaka jiosy tany Egipta tamin' ny vanimpotoan' ny Persiana akemenida (taonjato faha-5 tal. J.K.) izay nonina teo amin' ny nosy Elefantina nantsoina hoe Yeb tamin' izany fotoana izany.
Ny sampan' ny jodaisma ankehitrinyHanova
Ny jodaisma rabinikaHanova
Ny jodaisma rabinika (hebreo: יהדות רבנית / Yahadut Rabbanit) izay atao hoe koa rabinisma no be mpanaraka indrindra ao amin' ny jodaisma, hany ka raha miresaka ny amin' ny jodaisma dia izy no tonga ao an-tsain' ny maro voalohany ka lasa ampitovina aminy. Misy sampam-pirehana telo lehibe ny jodaisma rabinika, dia ny jodaisma nohavaozina sy ny jodaisma mpitahiry ary ny jodaisma ôrtôdôksa.
Ny jodaisma ôrtôdôksaHanova
Ny jodaisma ôrtôdôksa dia firehan' ny jodaisma rabinika mihevi-tena ho hany mandray tokoa ny finoana sy ny fanaon' ny Jiosy mandala ny Lalàna voasoratra sy ny Lalàna am-bava nampitain' i Mosesy teo amin' ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia), miaraka amin' ny fivoasana ireo lalàna ireo. Heverin' ny Jiosy ôrtôdôksa ho mihataka amin' ny lala-marina ny Jiosy hafa rehetra ka ataony ho manao fampianaran-diso. Ny teny hoe "ôrtôdôksa" dia napetak' ireo Jiosy manaraka ny jodaisma nohavaozina ka misy ny manaiky an' izany ary misy ny tsy tia an' izany fa misafidy ny teny hoe Haredi.
Ny jodaisma mpitahiryHanova
Ny jodaisma mpitahiry, izay atao hoe koa Masorti, dia firehan' ny jodaisma rabinika izay mandray ny fotokevitry ny fanavaozana nefa tsy mandray izany ho lasan-davitra loatra na lalina loatra. Ny fihetsiketsehana masorti dia mitonon-tena ho firehana afovoany izay manome lanja ny fahefan' ny Talmud nefa manaraka ny fitsipika amin' ny fomba tsy hentitra loatra sady tsy mila fanajana amin' ny pitsopitsony ireo fanapahan-kevitra tany aloha, ka izany no mahatonga ireo rabiny halalaka kokoa amin' ny fivoasany ny Halakà. Ao Etazonia sy ao Kanada no tena ahitana ny jodaisma mpitahiry.
Ny jodaisma nohavaozinaHanova
Ny jodaisma nohavaozina dia sampan' ny jodaisma rabinika izay niseho tao Alemaina tamin' ny taonjaton' ny Fahazavana, tao amin' ny fihetsiketsehan' ny Haskala notarihin' i Moses Mendelssohn. Maro ireo firehana nipoitra tamin' izany izay namporisika ny Jiosy handray ny fandrosoana amin' izao andro ankehitriny izao sady hifanerasera amin' ny fiarahamonina ivelan' ny an' ny Jiosy. Indraindray koa ny jodaisma nohavaozina dia atao hoe jodaisma liberaly na jodaisma prôgresista.
Sampana hafan' ny jodaismaHanova
Ny jodaisma karaitaHanova
Ny jodaisma karaita dia firehan' ny jodaisma miorina amin' ny Baiboly hebreo sy ny fandavana ny Lalàna am-bava. Mifanohitra amin' ny jodaisma rabinika izany ny jodaisma karaita. Atao hoe קראות / qaraut ny jodaisma karaita ary בני המקרא / bnei haMiqra (midika hoe "zanaky ny Miqra") ny Karaita amin' ny teny hebreo. Mihena hery miandalana ny jodaisma karaita nefa misy fikambanana maro mbola mijoro ny ao Kahira any Ejipta, ny any Krimea, ny any Litoania sy ny any amin' ny toeran-kafa.
Ny jodaisma rekônstroksiônistaHanova
Ny jodaisma rekônstroksiônista no firehan' ny jodaisma prôgresista niforona farany indrindra sady ahitana mpino farany vitsy indrindra. Tamin' ny taona 1968 tao Etazonia no niforonany ka ny raby Mordechai Kaplan no nanorina izany tamin' ny fotokevitra nipoitra tamin' ireo taona 1920 sy 1930 ary 1940. Ao Etazonia sy ao Kanada no tena ahitana ity firehan' ny jodaisma ity. Ity firehana manaraka toetrandro ity dia mampianatra fa ny jodaisma dia sivilizasiona tsy mitsaha-mivoatra. Nitombo ilay fihetsiketsehana tamin' ny faramparan' ireo taona 1920 sy 1940 ary 1968 ka nisy ny sekoly rabinika niforona. Ny Halakà dia tsy heverina ho zavatra tsy maintsy arahina fa ho sisasisan' ny kolontsaina sarobidy tokony hotehirizina, afa-tsy raha misy antony hafa tsy hanaovana izany.
Ny literatioran' ny jodaismaHanova
Ny Lalàna na TorahHanova
Ny Torah (hebreo: תּוֹרָה "Lalàna") dia fitambaran’ ireo boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly hebreo (Tanakh). Ny fitambaran’ ireo no atao hoe Pentateoka na Boky dimin’i Mosesy ao amin’ ireo asa soratra kristiana.
Ireto avy ny anaran’ ireo boky dimy ireo ao amin' ny Baiboly hebreo na Tanakh:
Sefer Bereshit (ספר בראשית "Tamin' ny voalohany"): Genesisy na Jenezy
Sefer Shemot (ספר שְׁמוֹת "ireo anarana"): Eksodosy na Eksaody
Sefer Vayikra (ספר ויקרא "ary niantso Izy"): Levitika na Levitikosy
Sefer Bemidbar (ספר במדבר "tany an-tany efitra"): Nomery
Sefer Devarim (ספר דְּבָרִים "ireo teny"): Deoterônômy na Deoterônômia
Ny Mpaminany na Nevi'imHanova
Ny Nevi'im na Nebi'im (hebreo: נְבִיאִים‬ "mpaminany") dia ilazàna ireo boky mamorona ny fizaràna faharoa ao amin’ ny Baiboly hebreo. Mizara roa ny Nevi'im, dia ny Nevi'im rishonim ("mpaminany taloha") sy ny Nevi'im aharonim ("mpaminany taoriana").
Ny Nevi'im rishonim dia ahitana boky efatra, ka ireto avy izany:
Sefer Yehoshua na Yehoshua: Josoa
Sefer Shoftim na Shoftim: Mpitsara
Sefer Shemuel na Shemuel: Samoela voalohany sy Samoela faharoa
Sefer Melakhim na Melakhim: Mpanjaka voalohany sy Mpanjaka faharoa
Miisa efatra ny boki’ireo mpaminany taoriana, dia ireto avy:
Sefer Yeshayahu na Yeshayahu: Isaia
Sefer Yrmeyahu ("bokin'i Jeremià") na Yrmeyahu: Jeremia
Sefer Yehezkael ("bokin'i Ezekiela") na Yehezkael: Ezekiela
Ny Trei Assar dia manambatra ireo "mpaminany madinika", dia ny Sefer Hoshea (הושע) (Hosea), ny Sefer Yo'el (יואל) (Joela), ny Sefer Amos (עמוס) (Amosa), ny Sefer Ovadiyah (עובדיה) (Obadia), ny Sefer Yohnah (יונה) (Jona), ny Sefer Mikhah (מיכה) (Mika), ny Sefer Nahum (נחום) (Nahoma), ny Sefer 'Havakuk (חבקוק) (Habakoka), ny Sefer Tsefaniyah (צפניה) (Zefania), ny Sefer Haggai (חגי) (Hagay), ny Sefer Zekhariyah (זכריה) (Zakaria) ary ny Sefer Malakhi (מלאכי) (Malakia).
Ny Soratra na KetuvimHanova
Ny Ketuvim na Ketubim (hebreo: כְּתוּבִים "Soratra") dia fitambaran’ ireo boky iraika ambin’ ny folo mamorona ny fizaràna fahatelo sady farany ao amin’ ny Baiboly hebreo. Ireto avy ireo boky voasokajy ho Ketuvim:
Sefer Tehillim (Salamo)
Sefer Mishlei (Ohabolana)
Sefer Iyyôb (Joba)
Sefer Shir Hashirim (Tononkira Fanaperana)
Sefer Ruth (Rota)
Sefer Eikhah (Fitomaniana)
Sefer Qoheleth (Mpitoriteny)
Sefer Ester (Estera)
Sefer Daniel (Daniela)
Sefer Ezra wu Nekhem'ya (Ezra sy Nehemia mitambatra)
Sefer Divrei haYamim (Tantara)
Marihina fa mitambatra ho boky iray ny Bokin' i Ezra sy ny Bokin' i Nehemia izay misaraka ao amin' ny Baiboly kristiana, toraka izany koa ireo Bokin' ny Tantara (1Tantara sy 2Tantara).
Ny soratra mivaofy ny Soratra Masina jiosyHanova
Ny Talmoda (hebreoː תַּלְמוּד / talmud) dia fanangonan-dalàna izay ahitana ny fivoasana ny Torah ka ahitana ny fitambaran' ny fehezan-dalàna atao ho Misnà (hebreo: מִשְׁנָה / Mishnah), sy ny fivoasana ny Misnà atao hoe Gemarà (hebreo: גמרא / Gemarah), sy ny zavatra mahakasika ny lalàna nefa misy tsy itovizan' ny raby hevitra, mamorona ny atao hoe Halakà (hebreo: הֲלָכָה / Halakha), ary ny angano ampiasaina ho enti-manome ohatra momba ny lalàna dia atao hoe Agadà (hebreo: אגדה / Agadah). Misy karazany roa ny Talmoda, dia ny Talmodan' i Palestina (na Talmodan' i Jerosalema) sy ny Talmodan' i Babilôna. Ny Talmodan' i Babilôna no lasa soratra manam-pahefana noho ireo sekolin' ny raby tany Babilôna tsy ravan' ny zava-niseho rehetra mandritra ny taonjato maro, raha miohatra amin' ny an' i Palestina.
Ny Midrasa (hebreoː מדרש / midrash) dia lahateny na lahatsoratra ivoasana ny Baiboly hebreo mba hanazavana ireo zavatra momba ny lalàna na ny fitondrantena. Ny tanjon' ny fanaovana midrasa dia ny hanazava ny hevi-dalina miafina ao ambadiky ny hevitra ara-bakitenin' ny Baiboly. Anangonana ny fivoasana nataon' ny raby maro ny amin' ny lalàna sy ny fomba amam-panao resahina ao amin' ny Soratra Masina ny Midrasa. Maro ny Midrasa (Midrashim) voasoratra ka naharitra taonjato folo no nanaovana izany. Ny midrasa tranainy indrindra dia voasoratra tany amin' ny taona 200 tal. J.K. any ho any, ary ny farany indrindra dia tamin' ny taonjato faha-12 taor. J.K. Misokajy roa ny Midrasa, dia ny Midrasa halakà (hebreoː מדרש הלכה / Midrash halakha) sy ny Midrasa agadà (hebreoː מדרש אגדה / Midrash aggada).
Ny soratra ara-pivavahana tsy kanônikaHanova
Ny literatiora apôkaliptikaHanova
Ny literatiora apôkaliptika jiosy dia ilazana ireo boky mirakitra ny fahitana ny hiafaran' izao rehetra izao sy ny hiavian' ny tontolo vaovao tonga lafatra. Amin' ny jodaisma dia apôkrifa daholo ireo boky apôkaliptika ireo. Teo anelanelan' ny nanoratana ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao no nanoratana ny literatiora apôkaliptika jiosy.
Ireto misy ohatra ami'izanyː
Apôkalipsin' i Mosesy
Ny literatioran' ny LapaHanova
Ny "literatioran' ny Lapa" na "literatioran' ny Kalesin-danitra" (izay atao amin' ny treny hebreo hoe ספרות ההיכלות והמרכבה / Sifrut ha-heikhalot ve ha-merkava), izay ahitana lohahevitra mistika dia nosoratana tao Israely teo anelanelan' ny taonjato faha-4 sy faha-7 taor. J.K. Miisa 25 ny boky voasoratra tamin' izany. Ireo manampahaizana amin' ny Misnà na ny Talmoda no heverina fa nanoratra azy ireo. Ireo boky ireo dia mitantara fahitana tsapa tao anaty fahavarianam-panahy momba ny Lapa (Heikhalot) fito any an-danitra izay niseho mandritra ny fiakarana mistikan' ny Kalesin-danitra (Merkava) sy ny lanitra maro sy ny anjely sy ny seza fiandrianan' Andriamanitra ka ny toko voalohany ao amin' ny Bokin' i Ezekiela no velabelariny sy itariny.
Ny soratra mifandray amin' ny kolontsaina jiosyHanova
Ny literatiora filôzôfika jiosyHanova
Ny filôzôfia jiosy dia ny fihaonan' ny filôzôfia grika sy ny teôlôjia jiosy. Ny filôzôfa jiosy fantatra indrindra dia i Solomon ibn Gabirol, i Saadia Gaon, i Judah Halevi, i Maimonides ary i Gersonides. Nisy fiovana lehibe ny filôzôfia jiosy tamin' ny vanimpotoan' ny Fahazavana (taonjato faha-18 sy faha-19). Misy roa karazana ny firehan' ny filôzôfia jiosy, dia ny filôzôfia ôrtôdôksa sy ny filôzôfia tsy ôrtôdôksa. Isan' ny filôzôfa jiosy ôrtôdôksa i Eliyahu Eliezer Dessler, i Joseph B. Soloveitchik ary i Yitzchok Hutner. Isan' ireo filôzôfa tsy ôrtôdôksa malaza i Martin Buber, i Franz Rosenzweig, i Mordecai Kaplan, i Abraham Joshua Heschel, i Will Herberg ary i Emmanuel Lévinas.
Ny literatiora kabalistikaHanova
Niforona tao Espaina sy Frantsa tamin' ny taonjato faha-12 ny literatioran' ny kabala (hebreo: קבלה / Qabbala). Ny kabala dia firehana mistika (mampifandray mivantana ny fanahy amin' Andriamanitra) sy filôzôfika jiosy izay amin' ny ankapobeny tsy natao ho an' ny be sy ny maro. Tsy tenim-pinoana (na dôgma) ny kabala fa firehana ao anatin' ny jodaisma.
Heverin' ny mpanao azy ho "lalàna am-bava sy miafina" nomen' Andriamanitra an' i Mosesy tao amin' ny tendrombohitra Sinay (na Sinaia) niaraka tamin' ny Torah izay "lalàna am-bava sy ho an'ny rehetra" ny kabala. Tanjon' ny kabala ny fahalalana ny tontolon' Andriamanitra ka ny fanaovana fivoasana ny Torah sy ny fandinihana ny fiteny hebreo no ahatongavana amin' izany. Ny fahalalana ny fitsipika mifehy ny fanakambanana ny literan' ny abidy hebreo no ahafahana miditra any amin' izany tontolo izany. Ny boky malaza indrindra amin' izany dia ny Sefer ha-Zohar ("Bokin' ny famirapiratana"), hafohezina hoe Zohar (hebreo: זֹהַר), izay voasoratra amin' ny fiteny arameana tao Espaina tamin' ny taonjato faha-13.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jodaisma&oldid=1038016"
Dernière modification le 23 Septambra 2021, à 08:20
Voaova farany tamin'ny 23 Septambra 2021 amin'ny 08:20 ity pejy ity.